स्याटेलाइटबाट इन्टरनेट प्रदान गर्न के के छन् अवरोध ?
२०७६ फाल्गुण ७ बुधबार, काठमाडौं। स्याटेलाइटबाट इन्टरनेटको लागि अहिले विभिन्न कम्पनीहरुले काम गरिरहेका छन्। उनीहरु स्याटेलाइटको माध्यमबाट इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै अहिले विश्वले इन्टरनेटका लागि भोगिरहेको भौगोलिक अवस्थाबाट भने पार पाउन सहयोग पुग्नेमा कुनै दुईमत छैन। त्यसैले यो योजना साकार पार्न अमेरिकी अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्सले भने स्याटेलाइटबाट इन्टरनेट प्रदान गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ। ... बाँकी अंश»
यात्राः आफ्नो भन्ने आफ्नै हुन्छ
२०७६ फाल्गुण ७ बुधबार, हाम्रो हजुरबुवा रुद्रनाथ घिमिरेलाई संझदै एकजना बुवा रुनुभयो । हजुरबुवालाई भानिज दाजु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको गुन हामीले संझिरहेका छौं बाबु भनेर हाम्रो बाबालाई उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो । ... बाँकी अंश»
नगरवधुका नोकर यसरी बने चक्रवर्ती राजा
२०७६ फाल्गुण ६ मंगलबार, राजाको सबैभन्दा ठुलो सौभाग्य उनको कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ थिए। एक दिन उनले विनम्रतापूर्ण गुरु वशिष्ठसँग सोध्छन्-'गुरुदेव! मसँग यो समय जुन सबै प्रकारको समृद्धिहरु एकत्रित छन्, यसको कारण निकै ठुलो पुण्य हुनुपर्छ। त्यो पुण्यकर्म बारे म जान्न चहान्छु जसलाई जानेर म त्यस्तै पुण्य पुनः गर्न सकूँ,जसको फलस्वरूप आगामि जन्ममा मलाई यस्तै प्रकारको सुख-सुविधा प्राप्त होस।' ... बाँकी अंश»
श्रीकृष्णको नीतिका कारण अर्जुनबाट बचेका थिए युधिष्ठिर
२०७६ फाल्गुण ५ सोमबार, काठमाडौं । महाभारतको युद्धमा कर्णले युधिष्ठिरलाई पराजित गरेपछि घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि सहदेवले छाउनीमा लगेका थिए । यो कुरा थाहा पाएका अर्जुन युधिस्ठिरलाई भेट्न गएका थिए । युधिष्ठिरलाई भने अर्जुन कर्ण मारेर भेट्न आए भन्ने भान भयो । तर, जब उनलाई कर्ण अझै जीवित छन् भन्ने थाहा भयो, त्यसपछि उनले अर्जुनलाई हप्काए । ... बाँकी अंश»
किन पूरा भएनन ओलीका बाँचा
२०७६ फाल्गुण ५ सोमबार, वर्तमान ओली सरकारले दुई वर्षको अवधी पुरा गरेको छ । जनताको आँखाबाट हेर्ने हो भने यो सरकारले जनता समक्ष गरेका बाँचा कति पुरा भए कति भएनन मुल्याङ्कन गर्नु नै पर्दछ । निर्वाचनको समयमा तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) वन्यो। ... बाँकी अंश»
किन अमेरिका चिनियाँ तथ्यांकमा विश्वास गर्दैन ?
२०७६ फाल्गुण ५ सोमबार, काठमाडौं। गत डिसेम्बरयता चीन नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को कारण समस्यामा छ। चीनको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार यो भाइरसबाट अहिलेसम्म चीनमा मात्र १ हजार ७ सय ७० जनाको ज्यान गइसकेको छ। अन्य मुलुकमा थप ४ जनाको ज्यान गएको छ। यो भाइरसको कारण करिब ७० हजार मानिस संक्रमित रहेको बताइएको छ। यो भाइरस अहिले दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा फैलिइसकेको छ। ... बाँकी अंश»
जब राक्षसको अघि देवताहरुका राजा इन्द्रको अनुहार भयो कालो
२०७६ फाल्गुण ४ आइतबार, काठमाडौं । देवताहरुका राजा र ऐरावतका अधिपति इन्द्रको दरबारमा जब उनका गुरु बृहस्पति पुगे तब उनले बृहस्पतीतर्फ हेरेनन् उनको अवज्ञा गरे । उनि भित्र अभिमान आयो कि म त सम्राट हुँ यो सोचेर बृहस्पतितिर नहेरी आफ्नो काम गरिरहे। यस प्रकार उनको अभिमान जागृत भएपछि उनको शक्तिमा ह्रास आउन थाल्यो र उनको तेज समाप्त हुदै गयो । ... बाँकी अंश»
२०७६ फाल्गुण ३ शनिबार, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले यस वर्ष विकासको आधार खडा गरेको र अर्को वर्षदेखि उपलब्धिका वर्षहरु हुने बताएका छन्। आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै उनले तत्कालिन वाम गठबन्धनका तर्फबाट भएका प्रतिवद्धता यहि सरकारले पूरा गर्ने बताए। ... बाँकी अंश»
शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बन्दै अन्तरिक्ष
२०७६ फाल्गुण ३ शनिबार, काठमाडौं। अन्तरिक्षको विषयमा पछिल्लो समय व्यापक मात्रामा खोज तथा अनुसन्धान भइरहेका छन्। त्यसका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले आफ्ना योजनाहरुको माध्यमबाट यसको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन्। मानिस जिज्ञासु स्वभाव भएको प्राणी हो। त्यसैले जति बुझ्दै गयो, त्यति नै धेरै जिज्ञासा पनि उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले अहिले अन्तरिक्षको विषयमा पनि विभिन्न किसिमको जिज्ञासा उत्पन्न भइरहेका छन्। जसको उत्तर पत्ता लगाउन अहिले वैज्ञानिकहरु लागिपरेका छन्। फलस्वरुप उनीहरुले नयाँ नयाँ कुराहरु पनि पत्ता लाग्दै पनि गएको छ। ... बाँकी अंश»
अन्तरिक्ष यात्री क्रिस्टिना सबैभन्दा लामो समयसम्म अन्तरिक्षमा बिताउने पहिलो महिला
२०७६ फाल्गुण ३ शनिबार, काठमाडौं। अन्तरिक्षको यात्रा गर्ने काम निकै कठिन काम हो। त्यसका लागि मानिसमा ठूलै साहसको जरुरी हुन्छ। यति मात्र होइन, अन्तरिक्षमा नै बस्नु झन् कठिन काम हो। यस्तोमा अन्तरिक्षमा पुगेर फर्किनु नै एक ठूलो सफलता हो। यो सफलता हासिल गर्ने निकै कम मात्र मानिसहरु छन्। महिलाको संख्या अझै कम छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाकी क्रिस्टिना कोच सबैभन्दा लामो समयसम्म अन्तरिक्षमा बिताउने पहिलो महिला बनेकी छन्। ३ सय २८ दिन अन्तरिक्षमा बिताएर उनी गत बिहीबार पृथ्वीमा फर्किएकी छन्। ... बाँकी अंश»
रुखको टोड्को जस्तो शरीर कसले संचालन गरिरहेछ ?
२०७६ फाल्गुण २ शुक्रबार, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि र अहंकार यी आठ प्रकारका अपरा प्रकृति छन् जसलाई देखेर यो सारा संसार मोहित भइरहेको छ। भगवान नै मोहिनी माया हो, जसको मोहमा जीवले नाना प्रकारको कष्ट भोग्छन् अनि जन्म-मरणको चक्करमा फँसेर बस्छन् । अर्को परा चेतन प्रकृति छ, जसले सम्पूर्ण जगतलाई धारण गरेको छ । सबै भुत-प्राणी यहि दुई प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुन्छन् । म नै सारा जगतको उत्पत्तिको मूल कारण हूँ। म सिवाय संसारमा किंचित मात्र पनि अर्को कुनै वस्तु छैन । जसरी धागोमा मालाका दानाहरू उनिएका हुन्छन्, उस्तै यो सारा संसार ममा उनिएको छ। दानाहरूमा धागो छुपेर रहनको कारण देखिदैन । ... बाँकी अंश»
वैज्ञानिक प्रयोगशाला र पुजारी मन्दिरमा के खोज्छन् ?
२०७६ फाल्गुण १ बिहिबार, काठमाडौं । एक वैज्ञानिकलाई जति प्रेम आफ्नो प्रयोगशालासँग हुन्छ त्यतिनै प्रेम एक पुजारीलाई भगवानको मन्दिरसँग हुन्छ। पुजारी पनि मन्दिरमा भगवानको अघि आरती गर्छ, भोग लगाउछ, उपासना गर्छ। उसको लक्ष्य भगवानको दर्शन गरु भन्ने हुन्छ। जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, जो परम सत्य छ त्यसलाई जानुँ भन्ने नै हुन्छ। एक वैज्ञानिक पनि आफ्नो प्रयोगशालामा यही चाहन्छ कि म त्यस पूर्ण सत्य (absolute truth) लाई जानु , सत्यको खोज गरु भन्ने नै हुन्छ। ... बाँकी अंश»
दिल्ली चुनाव परिणामको संकेत
२०७६ माघ २९ बुधबार, केजरीवालका लागि दिल्लीको चुनावी दङ्गलमा प्राप्त भएको यो लगातार दोस्रो ठूलो जीत हो र उनको जम्माजम्मी ८ वर्ष पुरानो पार्टीले भारतको राजनीतिमा राखेको एउटा कीर्तिमान पनि । ... बाँकी अंश»
तीक्ष्ण बुद्धिका लागि हामीले के गर्नुपर्ला ?
२०७६ माघ २९ बुधबार, वशिष्ठ ऋषि गुफामा गएर ध्यान गर्न लाग्नुभएको थियो । तर त्यहाँपनि एउटा भ्यागुतोले आएर अलमल्यायो । मनमा शान्तिलाई बास गराउनुपर्छ। म को हुँ ? परमात्मा के हो, को हो र कस्तो हो भनी जिज्ञासा (Inquiry) राखेर परमात्मा-दर्शन गर्ने इच्छा मात्र लिइरहनुपर्छ । जब मौन ध्यानमा रहेर परमात्मा-चिन्तनमा नै मनलाई रमाइराख्नुहुन्छ तब परमात्माको जाज्वल्यमान् ज्योति तपाईंको अगाडि प्रकट हुन्छ। जुन स्थिति स्वयंले अनुभूति गर्न मात्र सक्नुहुन्छ तर त्यसलाई शब्दमा वर्णन गर्न भने सक्नुहुन्न। उमेरमै घुम्न गए भने मानिसहरू अनुभव सँगाल्न सक्छन् । यस प्रकारका अनुभवले उनीहरू विनम्रता, कार्यकुशलता र धैर्यजस्ता गुणहरू सञ्चय गर्न सक्छन्, जुन भविष्यमा उनीहरूलाई फाइदा दिने नै हुन्छ । ... बाँकी अंश»
बुद्धको हत्या गर्न चाहाने डाकु अंगुलिमाल यसरी बने भिक्षु
२०७६ माघ २८ मंगलबार, मानिसहरुलाई डराउनको लागि उनि जुन व्यक्तिको हत्या गर्थे उसको एक औला काटेर औलालाई माला बनाएर लगाउथे । यसकारण उनको नाम अंगुलिमाल थियो । गाँउका सबै मानिसहरु त्रसित थिए। उनिहरु डाकुको आतंकबाट छुटकारा चाहन्थे। ... बाँकी अंश»
गरीब देश, धनी सेना
२०७६ माघ २८ मंगलबार, काठमाडौं। मार्च २३ मा सधैंझैं पाकिस्तानले आफ्नो गणतन्त्र दिवस मनाउने गरेको छ। उसले सधैंझैं यसपटक पनि जिल एन्ड फेभरको नारासहित यो दिवस मनाउँदैछ। यो क्रममा पाकिस्तानले प्रदर्शन गर्ने शक्ति सैन्य शक्ति हो। यस क्रममा उसले हवाई सेना, स्थल सेना र जलसेना सबैले एकैपटक परेड गर्नेछन्। ... बाँकी अंश»
मृत प्रियजन तथा पूर्खाले वंशजलाई किन सताउछन् ?
२०७६ माघ २७ सोमबार, काठमाडौं । सामान्यतः यो प्रश्न अनौठो लाग्न सक्छ । तर धेरै पल्ट मानिसहरु आफ्ना मृत प्रियजनको बारेमा सोच्छन् । मृत प्रियजनहरुले उनीहरुको जीवनमा समस्या किन ल्याउँछन् यो अकल्पनीय हुन्छ सक्छ । पूर्वज आफ्नो वंशजलाई यातना दिनुमा दुई कारणहरु छन् । एक अतृप्त वासनाहरु अनि अर्को मृत्युपछिको जीवनमा प्रगति गरि उच्च लोक अथवा उपलोकमा जान नसक्नु हो । ... बाँकी अंश»
सिंहाशनमा खराउ राखेर भरतले चलाए राज्य
२०७६ माघ २६ आइतबार, काठमाडौं । हाम्रो संस्कृतिमा कति राम्रो उदाहरणहरू मिल्छन् । रामले पिताको वचन पूरा गर्न चौध वर्ष वनमा बस्न स्वीकार गर्नुभयो, यद्यपि पिताले आफ्नो मुखले वनमा जाने आज्ञा दिएका थिएनन्, तथापि माता कैकेयीको इशारा मात्रले वनवास जानुभयो । सीतालाई वनवास मिलेको थिएन, तर समस्त राज सुखहरूलाई ठोक्कर मारेर वनमा पतिको साथ जानुभयो। लक्ष्मणले पनि राज सुखहरूलाई त्यागेर दाजुको सेवा गर्नु राम्रो ठाने। ... बाँकी अंश»
अख्तियारको अभियोजनमा मरेकामाथि पनि पक्षपात : मुख्यसचिवलाई सफाइ खरिदारलाई दण्ड !
२०७६ माघ २६ आइतबार, यो काण्डमा संलग्न मानिएका पूर्व मुख्य सचिव माधव प्रसाद घिमिरे र पूर्व खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ माघ २२ मा यो मुद्दा दर्ताहुँदा यो संसारमा थिएनन । पदबाहेक यी दुइ व्यक्तिको हैसियत एउटै हो –दिवंगत । पदका हिसावमा भने एकजना कर्मचारी प्रशासनको सबैभन्दा उच्चतहको निर्णयक पदाधिकारी अर्थात मुख्य सचिव र अर्का कर्मचारी प्रसाशनको सबैभन्दा निम्नतहको, आदेशपालक पदाधिकारी अर्थात खरिदार । यी दुइमध्ये एकजनाको मृत्यु भैसको भनेर सबै दोष माफ गरियो भने अर्कालाई ठूलो दण्ड जरिवानको माग भयो । ... बाँकी अंश»
कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने कुरा: मन नपरेको छिमेकीलाई खाने बाघ आफ्नो दैलोमा आई पुगेको छ
२०७६ माघ २५ शनिबार, काठमाडौं। मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव सिफारीस गर्ने व्यक्ति दोषी भए, निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री कसरी निर्दोष ? यो आजको सर्वाधिक चासोको प्रश्न भएको छ ।अख्तियार सम्बन्धि कानूनको एक दफाको व्याख्या गर्दै स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ... बाँकी अंश»